Otu esi eme ka ebe obibi gi di iche iche iche site n'inwe ihe omuma
Eleghị anya ị malitere blọgụ ga maka na ị nwere ụfọdụ ihe ọmụma n’ime ịchọrọ ịkọrọ ndị mmadụ. Ndenye Blog bụ ebe dị mma ịmalite ịkekọrịta ibe na iberibe ihe ọmụma ahụ, mana ọbụna posty ndị nwere omimi enweghị ọkwa ọzụzụ nke ezigbo ihe omumu n’ịntanetị nwere ike inye.
Michael Dunlop na Decome Diary nie był w iji kwuo banyere iji ulo akwukwo iji mee ego online:
1 Zụlite a Strategy
Zụlite a Strategy
Ị nwere ihe ọmụma ahụ ma ọ bụ kedu ka ị ga – esi enweta ya?
Enwere ọmụmụ ihe ndị dị otú ahụ n’ebe ahụ? Kedu ka ị ga – esi mee nke gị? Mma?
Eleghị anya ị gụọla ụfọdụ n’ime edemede anyị na ebe a banyere ọtụtụ ụzọ dị iche iche ị nwere ike isi nweta weebụsaịtị gị, dịka Ndi Akwukwo Akwukwo Akwukwo Akwukwo Akwukwo Ozo Naka Naka? na ọzọ 23 dị mfe iji chekwaa Blog gị.
Itinye ulo akwukwo di iche iche na-emeputa uzo ozo nke ugwo nke i nwere ike isre ugboro ugboro. Dị ka Forbes si kwuo, e-mmụta bụ n’ezie ahịa ahịa, nke a na-atụ anya na ọ ga-emerụ 107 $ ijeri n’ime ahịa na njedebe nke afọ a. N’ezie, ọnụ ọgụgụ ahụ gụnyere ụdị mmemme ọzụzụ n’ịntanetị niile, yabụ niszowy gị nwere ike ma ọ bụ daa na njedebe dị elu nke ụdị ahụ. Ma ụlọ ọrụ a na-atụ anya itolite, yabụ ọ naghị egbu oge ịbanye n’ihe ị na-enweta, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere ihe dị mkpa ị ga-ekwu.
Ị nwere ike ịhọrọ ịkwado ụlọ ọrụ ahụ na mkpokọta gị site na ikpo okwu dị ka Moodle. Moodle bụ isi ihe na-emeghe emepe nke dị site on ọtụtụ ụlọ ọrụ ntanetị weebụ ma ọ bụ nwere ike ịwụnye na njedebe azụ nke saịtị gị. Ị nwere ike ịtọzi nchedo paswọọdụ, gbakwunye ma hichaa ụmụ akwụkwọ, mepụta ihe ngosi ọkpọkọ ọcha na ọbụla na-akpọsara nkata czat. Ọ bụ n’ezie usoro nhazi nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma maka ụdị ụdị ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Agbanyeghị, enwere nhọrọ ndị ọzọ ole na ole ọ bụghị naanị inye gị ohere ịme ihe omumu kama ọ nwere ike inye gị ndị na-ege ntere nkere ike ịmasị na ebe nkuzi ahụ. Ọ bụrụ na saịtị gị enwetaghị ọtụtụ okporo ụzọ ugbu a, nke a nwere ike ịbụ nhọrọ ga – agbanwe nke ga – enweta echiche gị n’ihu ndị mmadụ.
O nwere ike ịbụ na onye ọ bụla nwere ike ịmepụta ma ọ bụ ree ụlọ ịntanetị. Ị nwere ike ịtọ ụgwọ maka ụzọ gị, dabere na iche na ya na ihe maka ya. Ha nwere ihe karịrị nde ụmụ akwụkwọ 9 maka ndebanye aha gbasara 4 nde kwa ọnwa. Maka ụmụ akwụkwọ Udemy na-ezo aka na gị n’ihi ahịa ha, ha na-etinye ọkara nke ihe ọ ga-efu.
Ikpo okwu dị mfe iji ma ị nwekwara ike itinye ọdịnaya vidiyo na ngwakọta ahụ. Uru kachasị dị okporo ụzọ na ihe nchọgharị ndị na-eleta saịtị ahụ. Nadal ka nwere ike iweta ụmụ akwụkwọ n’ime onwe gị maịị – edebe 100% nke ahịa ndị ahụ, yabụ, ọ dabara kpamkpam na mbọ nrụọrụ weebụ gị. Agbanyeghị, ị ga-erite uru, ọbụlagodi na ọ bụ ntakịrị ntakịrị, strona na mbọ ahịa Udemy.
N’ezieCraft bụ ntụpọ zuru okè ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụziri ndị ọzọ otú e si arụ ọrụ. Ebe a-arụ ọrụ na WordPress blog, który ma 5% ma ọ bụ na ị nwere ike ịkwụ ụgwọ obere ego ọ bụla. Nke a bụ ụzọ dị mma isi jikwaa ma debe ihe niile na weebụsaịtị gị.
Ulo ikpo okwu di mfe iji ya ma ha na-enye ihe ngosi nke ihe ndi ozo mere ka i nwee ike inweta echiche maka imeputa onwe gi na otu o kwesiri isi guzobe ya.
Akụrụngwa na-enye nhọrọ dị iche iche na Udemy ma ị nwekwara ike ịnabata ọmụmụ na ebe nrụọrụ weebụ gị. Nke a ptara na ị ga-anọgide na-edozi akara gị kama ịmalite ịmalite ime ka ọ bụrụ na ị ga-enwete ya. Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka otu nwa akwụkwọ maọbụ na ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ kwa ọnwa.
You nwere ike nọrọ n’ụlọ nkuzi ọmụmụ n’okpuru ngalaba aha gị ma ọ bụ jiri ngalaba nkuzi. Ikpo okwu a na-enyekwa nkwado otutu asusu na ikike iji wuo ibe weebụ n’elu ikpo okwu ha.
Udemy nseta ihuenyo nke Web Web Development peeji nke
Nke a nwere ike ịdị iche site na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ele ụfọdụ n’ime ụlọ akwụkwọ mahadum n’efu, ọmụmụ na akparamagwa na onu ahia n’elu ndepụta, ọbụna n’etiti ndị na-aro ọrlor. Otú ọ dị, ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike ịbụ ihe dị iche iche nke isiokwu ahụ, dka otu esi amalite ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ezigbo usoro SEO na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ yana. Mee ụfọdụ ọrụ nyocha ihe ochie, dị mma site na ilele isiokwu, okwu ọchụchọ ndị mmadụ na-elele, isiokwu na-agbanwe na mpaghara gị. Mgbe ahụ, gafere na usoro ikpo okwu dị n’ịntanetị wee hụ ihe ọmụmụ enyere ugbua. Eleghị anya ị ga-ahụ ebe ma ọ bụ abụọ ị nwere ike itinye uru.
Nhọrọ ọzọ bụ imebi ndị na – ege gị ntị. Naanị kpọtụrụ ndepụta nzipu ozi gị ma jụọ ha ụdị ụlọ ọrụ ga-amasị ha ma ọ bụ ajụjụ ndị ha nwere azabeghị. Ọ ga-eju gị anya na nsonaazụ ndị ahụ, ị ​​nwere ike wepụta echiche maka usoro mmụta ọhụrụ.
Jen Conner, enyi ya na onye na-azụ ahịa n’ahịa, na-eji ụlọ ọrụ weebụ ya enye ụlọ ọrụ weebụ n’ịntanetị. O nwere ihe a iji kwuo banyere ịme ihe omumu ihe omuma:
"Ọ na-abịa n’ezie inye ha ihe karia ha nwere ike inweta n’ebe ọ bụla ọzọ. Otu n’ime ogbako m nọ na-emepụta ihe ndị na-eme na ebe obibi gị. E nwere ọtụtụ nkuzi dị iche iche na isiokwu a nakwa yana ndebiri ị nwere ike ịzụta na akwụkwọ ị nwere ike ịgụ. Ekwesiri m n’echiche n’ezie n’èzí igbe iji mee ka ọmụmụ ihe m baa uru. Otu ihe m prostu bụ ime ihe atụ ụfọdụ nke vidio nke na-akọwapụta ihu igwe. Mgbe ahụ, agbakwunyere m na ihe atụ nke usoro dị iche iche iji mepụta ederede na mmetụta. Ọ dịghị onye ọzọ na-eme nke ahụ n’oge ahụ ma mee ka m nwee ọganihu. "
Ụfọdụ n’ime ihe ọmụmụ to omimi nke di na Udemy bụ John Pullos kụziri. Pullos otrzymał 4,8 na 5 gwiazdek w witrynie 191 Ntụle ma kụziere ụmụ akwụkwọ 7233 na Nmalite na klasę Nikon Digital SLR nanị. Ihe ole na ole ọ na – eme yiri ka ọ ga – eme ka ọ nwee ihe ịga nke ọma:
Nkọwa doro anya nke foto ya na ihe ọmụma ọ nwere inye
Ọ bụrụgodi na ụlọ ọrụ gị abụghị foto dijitalụ, ị nwere ike ịmụta ihe site na ịmụ ndị nkuzi na-aga nke ọma na ihe na-eme ka ha pụọ ​​iche na nkuzi ndị ọzọ enyere na nyiheị.